HTC U12 Plus durba waxay heleysaa cusbooneysiin cusub | Androidsis
Haaruun Rivas | | HTC, Noticias
HTC waxay sii deyneysaa cusbooneysi cusub oo loogu talagalay taleefankeeda ugu muhiimsan xilligan, HTC U12 Plus. Qalabkan, oo la soo saaray Maajo, wuxuu durbaba ku raaxeysanayaa horumarin cusub oo ku saabsan ismaamulka iyo qaybta waxqabadka guud.
Xirmada casriyeynta ayaa sidoo kale la socota CryptoKitties, ciyaar macquul ah oo dareen leh taas oo aan ugu isticmaali karno Ether lacag ahaan taranka, iibinta iyo ururinta bisadaha dalwaddii. Tani waxay ku hoos jirtaa xayiraadda Ethereum, oo ah midka labaad ee ugu caansan cryptocurrency ka dib Bitcoin. Soo ogow waxa ku saabsan!
Cusboonaysiinta ayaa bilowday inay gaarto qaar ka mid ah dadka isticmaala Hong Kong, sida ay sheegayaan warbixino kala duwan. Isku mid Waxay hoos timaadaa nooca 1.25.708.3 oo miisaankeedu yahay 136,63 MB. Iyada oo ay ku jirto, baytarigu wuxuu ina siinayaa madax-bannaanid ballaadhan si aan uga sii walwalsho xeedho iyo waxqabadka guud ee xarunta ayaa lagu hagaajiyay dhinacyo dhawr ah: multimedia, barnaamijyada socda, ciyaaraha, iyo kuwo kale.
Dhinaca kale, shirkaddu waxay ku dhawaaqday in, iyadoo la cusbooneysiinayo, tiknoolajiyada moobiilka ee 'Edge Sense' ayaa la qiyaasay. Sababtaas awgeed, xasaasiga badhanka U12 + wuxuu uga jawaabayaa si ka wanaagsan sidii hore.
CryptoKitties, ciyaarta xiisaha iyo caansan waxay u timaadaa HTC U12 Plus
Isticmaalayaasha horey u cusbooneysiiyay taleefanka ayaa leh tan ciyaar badan oo jilicsan. Gudaha 'CryptoKitties' waxaan ku daryeeli karnaa, iibin karnaa, iibsan karnaa, ka soo qaadan karnaa oo ka dooran karnaa bisado badan oo dalwad leh oo laga heli karo dukaanka ciyaarta. Dhammaan waxay ku hoos jiraan nidaamka lacag bixinta Ethereum.
Ciyaartu waxay ku saleysan tahay nidaamka xannibaadda, oo si fiican loogu yaqaan 'blockchain', sidaas darteed waxaa loo bixiyaa ikhtiyaar maalgashi oo aad u xiiso badan oo soo jiidasho leh haddii aad rabto inaad soo gasho adduunka Ethereum. Haddii kale, waxaan had iyo jeer u isticmaali karnaa oo keliya inaan ku raaxeysto oo aan isla seexanno.
Ugu dambeyntiina, marka la eego sida loo qaybinayo cusboonaysiintaan, waa inaan ku samirnaa samir inta ay ka gaareyso qalabkeenna, maadaama shirkaddu aysan ka hadlin wax ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ama habka ay ugu kala firdhin doonto adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » HTC U12 + wuxuu bilaabay inuu yeesho cusbooneysi cusub oo dhowr horumarin ah iyo CryptoKitties ah